iWatermark + ye-Android Ekhutshiweyo. Khusela iifoto zakho kunye nevidiyo. | Plum emangalisayo
UMHLA: 7 / 25 / 17
IPrinceville, HI-Plum emangalisayo, LLC. -IWatermark + ye-Android Ikhutshwe. Khusela iifoto zakho kunye neevidiyo ngeWatermark +
Kumakhulu eminyaka eyadlulayo ii-watermark ziqale njengamanqaku okuchonga asetyenziswe xa kusenziwa iphepha. Ngexesha lokuveliswa kwephepha elimanzi kwagqinwa isitampu / uphawu. Indawo ephawuliweyo yahlala incinci kunephepha elijikelezileyo, ngenxa yoko igama le-watermark. Elo phepha, xa lomile kwaye labambelela ekukhanyeni, labonisa i-watermark. Emva kwexesha le nkqubo yasetyenziselwa ukuqinisekisa ubunyani bamaxwebhu asemthethweni, imali kwaye ngokubanzi ukukhusela ubuqhetseba.
I-watermarking yedijithali yeyona ndlela yakutsha nje yokubukeka. Ngokufana nee-watermark ezibonakalayo ephepheni, ii-watermark zedigital zisetyenziswa ukubonisa umnini / umyili kunye nokuqinisekisa imidiya yedijithali njengemifanekiso, iaudio kunye nevidiyo.
-Ukuba iiFoto / iiVidiyo zihamba ngentsholongwane zibhabha zibaleka ngokungalandeleki kuzo zonke iindlela. Rhoqo, ulwazi lomnini / lomdali lulahlekile okanye lilibalekile.
I-iWatermark + ye-Android yisoftware. YiWatermark + kuphela enazo zonke ezi mpawu:
1. Iimpawu zamanzi kunye neevidiyo.
Ukusetyenziswa kweewatchark ezininzi kwifoto enye.
3. Watermark enye okanye iifoto ezininzi kwi-batch mode.
4. Isakhono sokuyila, ukugcina kwaye sisebenzise iindidi ezi-7 zeewatchark, kude kakhulu kunalo naluphi na olunye uhlelo lokujonga izixhobo. Iiwatchark ezisi-7 zizonke = 5 ezibonakala + 2 ezingabonakaliyo ezidweliswe ngezantsi.
Iindidi zeWatermark ezibonakalayo (5)
Isicatshulwa seWatermark- kwaye utshintshe ifonti, umbala, i-engile, opacity, njl.
-I-Arc Text Watermark- kwaye utshintshe ifonti, umbala, i-engile, opacity, njl.
-Bitmap / Ilogo yeWatermark -ngenisa ilogo yakho okanye usebenzise ubugcisa kwilayibrari ebandakanyiweyo.
Utyikityo lweWatermark- lukrwaqula, lwenze kwaye lusebenzise iwatch usebenzisa utyikityo lwakho.
I-QRCode Watermark-yenza i-watermark efana nebhakhowudi, efundeka yiyo nayiphi na ikhamera ye-smartphone kwaye inokuba namagama angama-4000 olwazi, njengegama, i-imeyile kunye ne-url.
Iintlobo ezingabonakaliyo zamanzi (2)
Imethadatha Watermark -yokwenza ii-watermark ezibandakanya iithegi ze-IPTC / ze-EXIF (njengolwazi lwekhamera, i-GPS, ilungelo lokushicilela, njl.
I-Watermark yeSteganographic -ukufaka / ukungenisa ulwazi olufana negama, i-imeyile kunye / okanye ikhonkco lewebhusayithi kulombala wedatha yesithombe.
5. I-iWatermark + kuphela enelwatchark eshukumayo ebambisa / ifake ulwazi olungabonakaliyo kwifoto.
6. Isakhono sokugcina isiseko sedatha yazo zonke iiwatchark.
7. Iifonti ezingama-292 ezilungileyo kakhulu kwiitermark zakho zetekisi.
8. Bhala umxholo kunye nembonakalo
9. Isikena sokusayina ukuze ungenise kwangoko utyikityo lwakho okanye enye imizobo njengejamana.
10. Jonga kwangaphambili kwaye uhlengahlengiso lwefonti, umbala, isikali, opacity, ubungakanani, isikhundla kunye nekona.
11. Jonga imethadatha & exif kwiifoto.
12. Yenza iithegi zemethata kwiitermark zetekisi. Umzekelo, kongeza ngokulula i-GPS, uhlobo lwekhamera, iilensi okanye enye ingcaciso ekwiteksti yombhalo eboniswe kumntu ngamnye okanye kwiibatch zefoto.
Zonke ezi mpawu zincedileyo iWatermark + yaba yeyona nto idumileyo nenokusetyenziswa ngaphambili yokwenza iitermark kunye neefoto zemilambo yeefoto zoochwephesha kunye nokuqala.
Sukulungela i-watermark embi okanye akukho watermark ke ngoko akukho nxibelelwano kuwe. IWatermark + ngokungabonakaliyo ikhusela kwaye ikhusele iifoto zakho njengepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ngokongeza ubuqili kunye / okanye ii-watermark ezingabonakaliyo ezinegama lakho leshishini, ulwazi lobunini kunye / okanye ikhonkco kwindawo yakho. IWatermark + yinkqubo yokuqala yokubonelela ngokukhetha okungabonakaliyo okungu-2 okungabonakaliyo + okungu-5 = 7 kweentlobo zee-watermark ukuze zilungele iimeko ezahlukeneyo.
Umfoti / uMzobi uHarry Janssen-FNZIPP III
-I-Auckland Photographer yoNyaka ka-2011
-Umfoti wezithombe waseNew Zealand woNyaka wama-2013
-Ingcali ye-Photoshop Lightroom yeNgcali yeAdobe
iWatermark + yeSishwankathelo se-Android
? Akukho ntengiso
? Akukho kuthengwa kwe-App
I-iWatermark +, kuphela kwesixhobo sokukhangela esibonakalayo kuwo onke amaqonga ama-4 e-Android, i-iPhone / i-iPad, iMac kunye neeWindows. I-iWatermark + yeyona nto idume kakhulu kwaye isebenziseka phambili ekwenzeni iitermark kunye neefoto zemilambo yeefoto zoochwephesha nabaqalayo.
Sayina iifoto zakho nge-5 ebonakalayo kunye ne-2 engabonakaliyo ... Iindonark ezi-7. Sebenzisa i-watermark enye okanye ezininzi ngaxeshanye kwelinye okanye kwiibhlog zeefoto. Iifoto zika-Watermark zinokwabelana ngokukhuselekileyo kwi-Facebook, kwi-Instagram, kwi-Twitter, kwi-Camera Album, kwi-Clipboard okanye kwi-imeyile.
Rhoqo, xa ifoto okanye ividiyo ihamba yentsholongwane umnini / umyili uyilahlekile okanye uyilibele. Ukongeza i-watermark ibonisa ngobuqili, nokuba yeyiphi ifoto okanye ividiyo yakho, ukuba yeyakho. Ukusetyenziswa kweendaba zosasazo loluntu kunye nesantya apho ifoto / ividiyo iya khona yadala imfuno yeendlela ezintsha zokuqinisekisa ubunini beefoto / ividiyo. I-iWatermark + iyazifezekisa ezo mfuno ukuze isayine iifoto zakho zobugcisa ngesandla kunye nobango, ikhuseleke kwaye ugcine ubunini bemveliso kunye nodumo. Ukujonga amanzi kubonisa ubunini beefoto kunye nevidiyo. Njengokutyikitya igama lakho kuxwebhu, ukubonwa ngokubonakalayo, ngaphandle kokuya kwimithombo yeendaba kwilizwe, ukuba yipropathi yakho.
Ifanelekile ukuba isetyenziswe ngeCanon Inc., uNikon Inc., iOlympus Inc., iSoft Inc., i-Samsung, i-SLR, iikhamera eziqhelekileyo kunye nazo zonke iifowuni ze-smartphones kunye neetafile.
Khuphela uguqulelo lwasimahla lwe-Android (ibeka encinci 'Yenziwe ngeWatermark + kwifoto nganye)
Khuphela inguqulelo ehlawulelweyo ye-Android
Khuphela inguqulelo ehlawulelweyo ye-iPhone / iPad
I-2 min ividiyo
I-Plum emangalisayo igxila ekwenzeni imveliso kunye nesoftware enefoto ye-OS X, i-iOS, iWindows kunye neWindows. IPlum emangalisayo yinkampani yabucala ebekwe e-US kodwa ineeofisi kwilizwe jikelele. Phakathi kweemveliso zabo ezidumileyo yiCopyPaste ®, iKey, iClock ®, iWatermark®, iPixelStick, SpeechMaker kunye nePhotoMatte. IPlum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995.